Wikipedia:Takelaka/Tahiry 2015 - Wikipedia
Ny mpanao didy jadona dia avy amin'ny fitondrana noho ny ny antony maro toa ny olana ara-tsosialy goavana na ny tsy fananana asa, ny vidim-piainana, na ny korontana eo amin'ny mponina. Ny mpanao didy jadona dia tokony tohanan'ny vondrona mahery, toy ny tompon-tany, ny tompon'ny orinasa tsy miankina, tompon'ny banky na indraindray andrim-panjakana toy ny Eglizy Katolika mba nametraka lalàna sy ny filaminana an-kery. Izany hery izany amin'ny ankapobeny dia mikendry ny ampaha mahantra ny fiaraha-monina, toa ny mpiasa tsy an'asa, foko vitsy an'isa, kilasy miasa sy ny tanàna natao tamin'ny tanàna baoritra. Ohatra tamin'izany, ny fitondrana jadona any Amerika Latina. (tohiny...)
Ny zotra Fianarantsoa-Côte Est , na FCE , dia zotran-dalamby ao Madagasikara mandalo amin'ny tanànan'i Fianarantsoa amin'nyamorintsiraka atsinanan'ny nosy, ary indrindra indrindra ao Manakara, izay ao amin'ny faritanin'i Fianarantsoa ihany koa. Mitondra ny anaran'ilay zotra ny orinasa mpitrandraka, Fianarantsoa Côte Est.
Ny mpanjanaka frantsay no namboatra azy io tamin'ny 1926. Nalefa an-tapatapany ny zotra FCE. Avy ao Manakara hatrany Manampatrana ary mandalo amin' Ambinany ny singa voalohany tamin'ny 24 Jolay 1934. Naitatra ny 1 Jolay 1935 hatrany Tolongoina ny zotra ary tanteraka ny 1 Aprily 1936 163 km no halavany, ary mandalo amina gara 17 (De Cantelou no mpandrafi-trano), tetezana 65 ary tonelina 48 no hita amin'iay zotra. 1074 m no refin'ny ao Ankarapotsy. (tohiny...)
Ny orinasa IBM no namorona ary nanomboka nampiasa azy ireo tamin’ny taona 1956. Lasa fitahirizan’angona faharoa ho an’ny solosaina fampiasa amin’ny ankapobeny izy ireo tamin’ny fihatombohan’ny taompolo 1960. Ampihatsarana hatrany izy ireo ary ampiasaina amin’ny solosain’ny tsirairay ary ny servera ankehitriny. Orinasa miisa roanjato mahery no efa namoaka kapila mateza, na dia orinasa telo no tena hita misongadina toa i Seagate, Toshiba na Western Digital. Ny vola manontolo voaangona amin’ny fivarotana izy ireo dia 32 miliara dôlara isan-taona izay nihena telo isan-jato raha oharina amin’ny taona 2012. (tohiny...)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Takelaka/Tahiry_2015&oldid=774009"
Voaova farany tamin'ny 8 Janoary 2016 amin'ny 12:52 ity pejy ity.